Fashilida Wadnaha Wadnaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka > Gabsiiya wadnaha
Baro wax badan oo ku saabsan isku-buuqa wadnaha ee isku-dhafan iyo calaamadaha digniinta ee ah inaad iska ilaaliso.
Waa maxay Fashilida Wadnaha Wadnaha?
Wadnaha oo istaaga, ama CHF, waa xaalad daba-dheer oo wadnuhu uusan u shubin dhiigga sida ugu habboon. Wadna qabadku wuu dhici karaa haddii aanu wadnuhu wax soo garaaci karin ama si ku filan u buuxin karin. Tani waxay sababi kartaa dheecaan fara badan oo ku dhaca sambabaha, beerka, caloosha ama qeybaha hoose.
Astaamaha waxaa ka mid ah neefta oo ku qabata, daal, lugaha oo barara, jimicsi la’aan, iyo garaacid aan caadi ahayn oo wadnaha ah.
Daaweynta wadnaha oo isku darsama wadnaha waxaa ka mid noqon kara cunista milix yar, xaddidida qaadashada dareeraha, iyo qaadashada daawooyinka laguu qoray. Dhaqtarkaaga waxaa laga yaabaa inuu ku beero qalabka wax lagu nadiifiyo ama qalabka wax lagu xiro sida loo baahdo.
Sideed u maarayn kartaa wadnahaaga wadnaha oo istaaga?
Maareynta maareynta wadnaha ee isku-xirnaanta macnaheedu waa neefsashadaada oo joogto ah iyo inaad caafimaad qab ahaato. Cunnadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa caafimaadka wadnaha. Iska yaree qaadashada milixda ee cuntada iyo joogtee culeys caafimaad leh.
Kala hadal dhakhtarkaaga waxa sababa calaamadahaaga iyo sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo.
Xaddid ama baabi'i aalkolada
Maamul calaamadahaaga kale ee daba dheeraaday
Sii wadida qaadashada daawooyinka loo qoray
Is miisaan maalin kasta
Kala hadal daryeel bixiyahaaga qorshahaaga daryeel la'aanta wadnaha ee isku dhegsan.
Qorshahaagu wuxuu u baahan yahay inuu tixgeliyo jadwalkaaga, sida aad u firfircoon tahay, dhaqankaaga asalka ah, iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee laga yaabo inaad qabto. Waxaad ubaahantahay inaad kaqeybqaadato abuuritaanka qorshahaaga daryeelka. Haddii kale uma badna in qorshuhu ku habboon yahay noloshaada ama aad fahmi doonto waxaad u baahan tahay inaad sameyso. Wixii macluumaad dheeraad ah iyo ilaha aad ka heli karto http://www.heart.org/